Myanmar OA6: P.S (2)
ကဲ … ကျွန်တော်တို့ P.S လေးတွေ ဆက်လိုက်ရအောင်။ တစ်ခုလောက်တော့ ဝန်ခံထားပါဦးမယ်။ အခု မြန်မာလိုရေးထားတာတွေဟာ ကျွန်တော်ဘာသာပြန်တာ မဟုတ်ဘဲ လုံးဝကွက်တိ ကူးယူဖေါ်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းစာအုပ်မှာတော့ ဘာသာပြန်ရေးသားသူအဖြစ် Shanti လို့ ရေးထိုးထားပါတယ်။
Margraet နဲ့ မေမေ See Food သွားစားကြတယ်လေ။ မေမေတို့ အစာတွေလျှောက်ကြည့်ပြီး တဝစားပစ်လိုက်ကြတယ်။
မင်းကိုချစ်တဲ့ … မေမေ
ထိုင်ပြီး ဆန္ဒပြုနေရုံနဲ့တော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြီးမြင့်စေမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင်က ငါးတွေကို ဖန်ဆင်းပေးထားပြီးသား။ ဒါပေမယ့် သားက ငါးစာတီကိုတော့ တူးရမှာပေါ့။
သားအမြဲတမ်း မှန်ကန်ချင်သလား။ ဒါမှမဟုတ် အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်ချင်သလား။
သားရဲ့ထုတ်ဝေသူတွေနဲ့ ချုပ်တဲ့စာချုပ်ကို သတိထားပြီး သေသေချာချာ ဖတ်နော်။ စာလုံးကြီးနဲ့နှိပ်ထားတာတွေက သူတို့ပေးမှာတွေ၊ စာလုံးသေးသေးနဲ့နှိပ်ထားတာတွေက သူတို့ကယူသွားမှာတွေဆိုတာ သတိရနေပါ။
Julie ရဲ့ အသက် ၄၀ ပြည့်မွေးနေ့မှာ တစ်ယောက်ကဒီစာတန်းလေးရေးထားတဲ့ ကဒ်အကြီးကြီးတစ်ခုပေးခဲ့လေရဲ့။
“ တောင်ကုန်း (အခက်အခဲ) လည်းကျော်ပြီးရော အရှိန်လည်း ပိုရလာတာပေါ့ ”
သားဖေဖေနဲ့ မေမေတို့လည်း တကယ့်ကို မှန်မှန်ကြီးရွေ့နေတာပဲနော် …
ကံတရားက တံခါးမကြီးကိုပိတ်ထားရင် ပြတင်းပေါက်က ကျော်ဝင်ပေါ့ကွယ်။
သားရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ဝေဖန်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးကို စဉ်းစားစေချင်တယ်။ ပထမဆုံး ချီးမွမ်းစကားနဲ့ သူ့ကိုနှစ်သက်ကြောင်းပြောပါ။ ဆံသသမားတောင်မှ သင်တုန်းဓါးနဲ့မရိတ်ခင် ဆပ်ပြာမြှပ်လေးတော့ သုတ်ပေးသေးတာ သတိရလိုက်ပါ။
Posted by Mr.Pooh @ မောင်ပွတ် at 12:41 PM
ဆီဗုံးလေးတပ်ဖို့ စိတ်ကူးလေး မရှိဘူးလားဗျ. လုပ်ပါဦး လာအော်ချင်လို့ပါ.
ဆက်လက်ကြိုးစားပါခင်ဗျာ. အလားအလာအများကြီးရှိပါတယ်. အားပေးနေပါမယ်....
ဒီလို see food လေးတွေ များများ ကျွေးနိုင်ပါစေ။
Thanks, I like those P.S .. Please post more.. :)
Aung Moe Myint said...
ကျွန်တော် Shanti ရဲ့P.S I Love You (မေမေ့ကိုချစ်တတ်သူတိုင်းသို့ )ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကို 1992/1993 လောက်ကတည်းက စဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ (ကျွန်တော်ဆယ်တန်းတုန်းကပေါ့) အဲဒီတုန်းက ပထမအကြိမ်ထုတ်ပါ။ ချက်ချင်းပဲဝယ်ပြီးဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အရမ်းလဲကြိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်လေးဟာ ကျွန်တော် ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတစ်အုပ်အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်၊သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ငှားပြီး ဖျောက်ပစ်လိုက်လို့အရမ်းနှမြောဝမ်းနည်းခဲ့ရပါသေးတယ်၊တော်သေးလို့ 2001 မှာ အဟောင်းတန်းက တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ လို့ ပြန်ဝယ်ခဲ့ရတာပါ။အခုအချိန်ထိလည်းဖတ်လို့ မ၀သေးပါဘူး။စာအုပ်လေးတောင် တော်တော်နွမ်းနေပြီ။ အဲဒီ ထဲက တစ်ချို့ စာပိုဒ် လေးတွေ (ဥပမာ။ ။ အမေး -ဘယ်အမေရိကန် သမ®တ မျက်မှန်တပ်သလဲ။ ဖြေ - သူတို့ အကုန်လုံး ။ ။ ထင်မထားဘူးဟုတ် ?) တောင်အခုချိန်ထိ နားမလည် နိုင်သေးပါဘူး။ Mr.Pooh ရဲ့Blog မှာ အဲဒီ စာအုပ်လေးထဲက ဟာတွေကို ပြန်ပြီးရေးပေးတာကျေးဇူးပါ။
ကိုယ်ရဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းကိုပြန်တွေ့ လိုက်ရသလိုခံစားမိပါတယ်၊ အကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးရေးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် Mr.Pooh ရဲ့Blog ကို အများဆုံးကြည့်ဖြစ်သူက ကျွန်တော် ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ : D
အော်ဒါနဲ့ PS1,PS2တွေပြီးရင် Wiiတို့ Xbox တို့လည်း တင်ပေးအုံးနော် =P
ကျွန်တော် Tag ပါပြီ
သင်္ကြန်ရနံ့လေးများ - ၂
သင်္ကြန်ရနံ့လေးတွေ - ၁
What they write !